Ny fiantraikany amin'ny fanelingelenana mahery vaika amin'ireo vatohara ho an'ny vatohara, toy ny fanala, ny rivo-doza, ny fitrandrahana, ary ny fiparitahan'ny aretina, dia mitaky ny mpitantana ny fanaraha-maso ny drafitra manara-maso izay manara-maso ny fanarahamason'ny fikarakarana. Ny mpitantana matetika dia mila mahafantatra ny habetsaky ny fahasarotan 'ireo fiantraikany mahery vaika ireo fotoana fohy aorian' izy ireo. Ny fanaraha-maso manara-maso dia manampy amin'ny fiatrehana ny fifandraisana amin'ny fotoana sy ny fifanajana amin'ny mpandray anjara ary manampy ireo hetsika fitantanana tarihina izay manohana ny fanarenana.
Fanaraha-maso mangatsiaka amin'ny nosy Keppel, Aostralia. Sary © Paul Marshall
Ny fandaharam-panaraha-maso manara-maso dia mety hivoatra amin'ny fotoana rehetra, ary mety hodinihina sy ovaina rehefa misy fiantraikany. Ny fampivoarana ny programa fanaraha-maso manara-penitra dia manaraka ireo dingana mitovy hita ao amin'ny fizarana drafitra momba ny fanaraha-maso. Na izany aza, ho an'ny tsirairay amin'ireto dingana ireto, dia misy fiheverana manokana ho an'ny fanaraha-maso mitsara izay tokony hodinihina.
Fametrahana tanjona sy varo-drivotra
Ny mpitantana dia tokony hisoroka ny faniriana hivezivezy amin'ny fanaraha-maso ny fari-pahasalamana rehefa misy ny fiantraikany na mety hitranga. Ny famoahana andro vitsivitsy handefasana (na famerenana) ny tanjona dia hampahafantatra dingana fanampiny amin'ny dingana amin'ny fampivoarana (na fe-tsara) ho an'ny drafitra fanaraha-maso mamaly.
Ny fanangonana fampahalalana momba ny habaka ara-pitenenana sy ny fahavitrihan'ny fiantraikany dia ny tanjona voalohany amin'ny fandaharanasa fanaraha-maso maro. Ny tanjona hafa dia mifandraika amin'ny fanangonana ny angona sy ny fanangonam-baovao izay ny mpitantana: 1) te-hizara amin'ny mpihaino marobe (oh: media, mpandray anjara, mpiara-miasa amin'ny mpiara-miasa, na 2) amin'ny hetsika hanohanana ny fanarenana izay mety hitranga amin'ny fanaraha-maso. Noho izany, ny famantarana ny mpihaino sy ny fifanakalozan-dresaka izay manentana ny fitantanana ny fitantanana dia sady manan-danja amin'ny fandaminana fikasana. Raha vantany vao voatendry ny tanjona, dia afaka mifidy fari-pahaizana ny manampahaizana ary manamboatra paikady samihafa.
Fidio ireo variables
Tokony hofantenana ny fari-pahalalana izay maneho ny fahasarotan'ny fiantraikany izay nitranga. Ny henjana dia mety hambara amin'ny fomba maro ary ny fampahalalana dia tokony horaisina amin'ireto manaraka ireto:
Ampahatelon'ny haran-dranomasina sy / na fiompiana haran-dranomasina voakasika vokatry ny fiantraikany
Mandritra ny fahavitan'ny haavon'ny fiantraikany
Karazana vatohara na mpikambana hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy vatohara indrindra
Karazana vatohara na mpikambana hafa ao amin'ny fiarahan'ny vatohara no kely indrindra
Ny manampahefana dia maniry ny hanara-maso ny fanaraha-maso mba hahitana sy hahatakatra ny fanovàna ka tokony hofantenana ihany koa ny famaritana izay ampiasaina amin'ny programa fanaraha-maso mahomby.
Ny fanaraha-maso mamaly matetika dia mitaky mpitantana hanadihady toerana maro ao anatin'ny fotoana fohy. Matetika, ny fomba fanombanana haingana dia ampiasaina hanampiana ireo mpitantana handanjalanja ny fomba mifanaraka amin'ny filan'ny fampahalalana, ary koa mamokatra angon-drakitra izay mahery sy azo ampitahaina amin'ireo angona nangonina teo aloha. Ny fomba toy izany dia novolavolaina hampiasaina mandritra ny fitrangan-tsinay sy ny fihanaky ny aretina ary aorian'ny tafiotra mahery (jereo ny loharano). Ny fomba voafantina rehetra dia mila azo tanterahina ao anatin'ny fetran'ny loharano sy ny fotoana ary mila averina ihany koa - ny fampiasana ireo fomba mitovy mandritra ny fikorontanana samihafa dia hahazoana antoka fa azo atao ny mampitaha.
Ny fanaraha-maso manara-maso dia mitovitovy amin'ny fanarahamason'ny fivoahana fa ny tanjona sy ny loharanom-pitaovana dia hamaritra ny karazana sy ny toerana misy ny toerana voafidy, ary ny isan'ireo habaka nanadihady manontolo.
Rehefa misy ny fiantraikany, dia mila dinihina manokana ny fiheverana manokana rehefa mifidy toerana:
Manombana ny habaka ara-batana sy ny havesatry ny fiantraikany
Toerana fanadihadiana solontenan'ny karazana habaka rehetra
Diniho ny fandinihana manokana ny fanaraha-maso ny tranonkala manan-danja ara-toekarena na ara-kolontsaina
Aza mijery fotsiny ireo tranonkala voakasika mafy
Ny mpitantana dia mety mahita fa zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny tranokala izay tsy voakasika amin'ny fanelingelenana manokana. Noho izany dia tokony hojerena ny tranokala ambany, ambany, ary avo lenta amin'ny tsindry aloka (ohatra ny mari-pamantarana avo lenta, ny onjan'ny rivotra manjavona mandritra ny tafiotra).
Ny fiantraikany amin'ny haran-dranomasina sy / na ny fikambanan'ny vatohara ho an'ny vatohara dia tsy azo ovaina afa-tsy amin'ny fotoana fohy aorian'ny fanelingelenana. Amin'ny ankapobeny, ny fahanjalanjana, ny famantarana hita maso amin'ny fisehoan-javatra famonoana sy ny fahasimbana amin'ny aretina, ary ny ravinkazo noforonin'ny vatohara nipoaka nandritra ny oram-baratra, dia hita mandritra ny herinandro vitsivitsy monja. Aorian'io fotoana io dia manomboka manangona alika ny alika maty ary mety hodiovina amin'ny vatohara ny vatohara.
Ny fanadihadiana dia tokony atao fotoana voafaritra tsara: 1) fiantraikany amin'ny mpikirakira na ny hetsika fanelingelenana, ary ny 2) ny mari-pahaizana henjana dia marina fa tsy misy fialan-tsasatra, mety hitranga raha toa ka efa be loatra na efa tara loatra ny fanadihadiana. Amin'ny ankapobeny, tokony hitranga mandritra ny herinandro 2-6 aorian'ny fanamafisana ny fitaintainana ara-tsakafo sy ny fanaraha-maso aorian'ny tondra-drano mafy raha tsy misy ny fiarovana ny ranomasina. Ny fisehoan-javatra manokan-tena, toy ny fipoahan'ny kardinaly, ary ny fipoahan'ny aretina dia mety mitaky mihoatra ny indray mandeha ny fanadihadiana mba hanombanana ny fivoaran'ny fipoahana.
Anisan'izany ny mpikambana ao amin'ny Community sy ny mpandray anjara
Ny fanelingelenana ny vatohara dia mety hitarika ny saina amin'ny fampahalalam-baovao sy ireo mpanapa-kevitra ambony indrindra ary mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny mpandray anjara momba ny haran-dranomasina. Ho setrin'ny fihenan'ny fiheverana toy izany, ny olona mandray andraikitra amin'ny fanaraha-maso dia mety ho fomba lehibe ho an'ny mpitantana hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny maha-zava-dehibe ny fiarovana sy ny fitantanana ny haran-dranomasina. Ny tombontsoa amin'ny fanarahamaso ny fandraisan'anjara dia voafaritra ao amin'ny Fanaraha-maso ny fandraisana anjara page.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInona no ataon'i Aostralia amin'ny fitantanana ny harambato lehibe